Ila Qosol …… Cabdullaahi Maxamed Cumar
Saturday January 08, 2022 - 14:13:21 in Articles by Hadhwanaag News
Bariido iyo badbaado Rabbi kaddib,
Bariido iyo badbaado Rabbi kaddib, ku soo dhawaada walaalayaal; sheeko kale oo ka mid ah sheekooyinkeennii, Ila Qosol.
Berigii uu xukunka hayey Kacaankii Siyaad Barre ee aadka looga biqi jirey, ayaa wasaarad ka mid ahayd wasaaradihii dalkii Soomaaliya; waxa shaqaalaheeda ka mid ahaa, nin madaxda aad ugu dhiirranaa oo aan hadalka kala gabban jirin!
Ninkaasi wuxu caado u lahaa, in marka nin madax ah wasaaradda la keeno ee uu khudbadda uu xilka kula wareegayo akhriyaba; uu ninkan dhiirrani u jawaabo oo ku yidhaahdo: " Wasiir, kii kaa horreeyeyba intaasuu noo sheegay markuu meesha yimid; waxna muu qabanin ee maxaannu kaa rumaysannaa?"
Dabadeedna, shaqaalihii wasaaradda; ayaa ninkii geesinimadiisa u bogey. Waxayna ninkii u doorteen, guddoomiyaha shaqaalaha wasaaradda!
Markii la doortay kaddibna, wuxu soo ag fadhiistay madaxdii wasaaradda. Hadalkii iyo weerarkii madaxdana wuu joojiyey!
Dabadeedna, shaqaalihii wasaaradda ee doortay oo xaaladdiisa ka yaabban; ayaa weydiiyey waxa mowqifkiisii iyo raganimadiisiiba badeley ee uu nimankan madaxda ah runta ugu sheegi la' yahay!!
Ninkii wuxu shaqaalihii ugu jawaabey: " Waar yeedhaheen, war ma idiin sheegaa; arrimuhu shalay markaan miiska xaggaa fadhiyeyna si bay ahaayeen, maanta markaan miiska dhinaca kale ka fadhiistayna; si kale ayay noqdeene oo madaxtinimadaa doqonimadaasi lehe iga raalli ahaada!"
Allahayoow run ma sheegay! Xilku dabcigaaga wuu dooriyaa! Miyaanay sidaasi ahayn?